चाँडबाँडमा मासु खादा कस्तो सावधानी अपनाउने र कस्ता मान्छेले मासु खान हुन्न – Kadar News : Oneline Digital News:
चाँडबाँडमा मासु खादा कस्तो सावधानी अपनाउने र कस्ता मान्छेले मासु खान हुन्न
लेखक : माया श्रेष्ठ
प्रकासित : ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १०:४७
मासु प्रोटिनयुक्त पौष्टिक आहार हो । सन्तुलित तवरबाट मासु भोजनमा समावेश गरेमा
शरीरलाई फाइदा हुन्छ ।
बडादसैँमा अन्य बेलाभन्दा खापपान बढी नै हुन्छ । वर्षभरीमा सन्तुलन मिलाएर खान पुग्ने मासु प्रायः धेरै नेपालीले दसैँको अवधिमा खाने चलन छ । यसपालीको वडादसैँ अरु बेलाको दसैँ भन्दा फरक तरिकाले मनाउँनुपर्ने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी झन जरुरी भएको पोषणविद् अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । कोरोना महामारीको बेलामा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानपिन ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । त्यसैले अस्वस्थकर मासुको विभिन्न परिकार बनाएर खादा पेट दुख्ने, फुल्ने, झाडापखाला, आउँ, ‘फुड पोइजनिङ’ लगायतका विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । डा. उप्रेतीका अनुसार मासु खाँदा सावधानी नअपनाएमा १ सयभन्दा बढी रोगको संक्रमण हुने खतरा हुुन्छ । मासुजन्य पर्दाथ सेवन गर्दा कसरी गर्ने, कति गर्ने, मासुलाई कसरी ताजा राख्ने भन्ने बारेमा डा. उप्रेतीले यस्तो सल्लाह दिन्छिन् ।
चाडपर्वका नाममा दीर्घरोगीले मासु खाँदा विष सेवन जस्तै बन्न सक्ने हुँदा समेसम्म दीर्घरोगी शाकाहारी नै बन्नु राम्रो हुन्छ । मासुका परिकार बनाउँदा प्राय तेलमा तारेको, भुटेको, सेकाएको र मसालेदार मासु खाँदा स्वास्थ्यलाई झन खतरा हुन्छ । चाडपर्वका नाममा नै कहिलेकाहीँ जिब्रोको स्वाद फेर्ने भन्दै दीर्घरोगीले पेट भरिसकेपछि पनि स्वादिलो चिज भने थपीथपी खाने गर्छन् । यस्तो बानी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । दीर्घरोगीले मासु खानै परेमा चिकित्कको सल्लाहमा चिल्लो, मसला कम राखेर साधारण तरिकाले पकाएर खानुपर्छ ।